မိုးတွင်းဘက် ရုံးသွားတဲ့အခါ သူမတူဘဲ အလှထူးနေစေဖို့ ဘယ်လိုပြင်ကြမလဲ - For her Myanmar
ယောင်းတို့ရေ … မိုးရာသီရောက်လာပြီဆိုတော့ ရုံးသွားရတာလည်း အနည်းနဲ့အများတော့ ကသီတယ် ဟုတ် ? ရုံးချိန်နီးနေတဲ့ကြားက အချိန်လုပြီး ပြင်ရဆင်ရတာလည်း မလွယ်ပါဘူး။ ဒီနေ့တော့ Stella က ယောင်းတို့အတွက် အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ ပန်းကန်လုံးစီးပြီး ပြင်လို့ရမယ့် makeup လိမ်းနည်းလေးကို ဝေမျှပေးသွားမှာပါ။
အရင်ဆုံး သုံးနေကျ skincare တွေအဆင့်ဆင့် လိမ်းပေးပါ။ Sunscreen လည်း မမေ့ပါနဲ့ဦး။ ပြီးရင်တော့ Primer သုံးရပါမယ်။ Primer သုံးတဲ့အခါ မိတ်ကပ်သားပိုတက်ပြီး ချွေးပေါက်တွေကို ဖုံးပေးပါတယ်။
နောက်တစ်ဆင့်က မိတ်ကပ်အရည် (foundation) ပါ။ Foundation သုံးတဲ့အခါ ကိုယ့်အသားအရေနဲ့ ထပ်တူကျတဲ့ အရောင်ကိုရွေးတတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်နော်။ ဖြူချင်လို့ဆိုပြီး တစ်ဆင့်ဖြူတာတွေ မရွေးပါနဲ့။ ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ foundation ရွေးနည်းကိုတော့ ဒီမှာဖတ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
ပြီးရင်တော့ loose powder သုံးပါမယ်။ Loose powder ကို Stella ကတော့ အရောင်မပါတဲ့အမျိုးအစားကို ပိုသဘောကျပါတယ်။ Loose powder က အချိန်ကြာလာရင် မိတ်ကပ်ကွက်တာ၊ အဆီပြန်တာတွေကို ထိန်းပေးပါလိမ့်မယ်။ ပါးနီ နဲ့ highlighter ကတော့ ယောင်းတို့သဘောကျတယ်ဆို ပါးပါးလေးထည့်လို့ရပါတယ်။ Stella ကတော့ highlighter လေး နည်းနည်းထည့်ရတာ သဘောကျတယ်။
ဒီအဆင့်ကတော့ အရေးကြီးအဆင့်ပါ။ ဘာလဲဆိုတော့ … မျက်ခုံးမွှေးဆွဲတဲ့အဆင့်ပါပဲ။ မျက်ခုံးမွှေးက လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသွင်အပြင်ကို လုံးဝပြောင်းပစ်ပေးနိုင်တာမို့ ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ မျက်ခုံးပုံစံကို ရွေးတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက မျက်ခုံးအရောင်ကို ကိုယ့်ဆံပင်အရောင်နဲ့ ထပ်တူကျတဲ့အရောင် ရွေးပေးဖို့ပါ။ နဂိုမျက်ခုံးရှိပြီးသား ယောင်းတွေကတော့ မျက်ခုံးမွှေးဂျယ်လ် (brow gel) လေးနဲ့ သပ်တင်ပေးလိုက်တာနဲ့ လုံလောက်ပါပြီ။
ဒီအဆင့်ကတော့ အချိန်မရှိရင် ကျော်သွားလို့ဖြစ်တဲ့အဆင့်ပါ။ (Stella ကတော့ ကျော်နေကျ ) အိုင်းရှဲဒိုးကို သဘာဝဆန်ဆန် အညိုရောင် ဖျော့ဖျော့လေးပဲ ပါးပါးတင်လိုက်ပါ။ မသိမသာလေးပေါ့။ မျက်ရစ်ပေါ်မှာ အိုင်းလိုင်းနာအညိုလေးကို သေးသေးမျှင်မျှင်လေး ဆွဲပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ။
မျက်တောင်ကော့တဲ့ စက်လေးနဲ့ အရင်မျက်တောင်ကော့ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ မျက်တောင်ကော့ဆေး (mascara) နဲ့ စိတ်ရှည်ရှည်ကော့ပါမယ်။ (နှာတော့မချေလိုက်နဲ့နော် )
နောက်ဆုံးအဆင့်မှာတော့ နှုတ်ခမ်းနီလေးဆိုဖို့ပဲ လိုတော့တာပါ။ Stella ကတော့ ဒီရာသီဥတုမှာ ရိုးရိုးနှုတ်ခမ်းနီတွေ၊ gloss တွေထက် ဖျက်ရခက်တဲ့ matte နဲ့ tint နှုတ်ခမ်းနီတွေကို ပိုအားပေးပါတယ်။ အရောင်ကတော့ ဒီနှစ်မိုးရာသီမှာ ခေတ်စားမယ့်အရောင်တွေ မှာဖတ်ကြည့်ပေးနော်။ Stella ကတော့ လန်းဆန်းတဲ့အသွင်ကိုပေးတဲ့ လိမ္မော်ဖောက်အရောင်လေးကို ယောင်းတို့ကို ရွေးချယ်စေချင်ပါတယ်။
ထွက်လာမယ့် makeup look လေးကတော့ ဒီလိုပုံစံလေးပါ။ အရောင်အငြိမ်လေးနဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်မှာ တက်ကြွတဲ့အသွင်လေးမို့လို့ ယောင်းတို့ သဘောကျနှစ်သက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော် …
ယောငျးတို့ရေ … မိုးရာသီရောကျလာပွီဆိုတော့ ရုံးသှားရတာလညျး အနညျးနဲ့အမြားတော့ ကသီတယျ ဟုတျ ? ရုံးခြိနျနီးနတေဲ့ကွားက အခြိနျလုပွီး ပွငျရဆငျရတာလညျး မလှယျပါဘူး။ ဒီနတေ့ော့ Stella က ယောငျးတို့အတှကျ အမွနျဆုံးနညျးနဲ့ ပနျးကနျလုံးစီးပွီး ပွငျလို့ရမယျ့ makeup လိမျးနညျးလေးကို ဝမြှေပေးသှားမှာပါ။
အရငျဆုံး သုံးနကြေ skincare တှအေဆငျ့ဆငျ့ လိမျးပေးပါ။ Sunscreen လညျး မမပေ့ါနဲ့ဦး။ ပွီးရငျတော့ Primer သုံးရပါမယျ။ Primer သုံးတဲ့အခါ မိတျကပျသားပိုတကျပွီး ခြှေးပေါကျတှကေို ဖုံးပေးပါတယျ။
နောကျတဈဆငျ့က မိတျကပျအရညျ (foundation) ပါ။ Foundation သုံးတဲ့အခါ ကိုယျ့အသားအရနေဲ့ ထပျတူကတြဲ့ အရောငျကိုရှေးတတျဖို့ အရေးကွီးပါတယျနျော။ ဖွူခငျြလို့ဆိုပွီး တဈဆငျ့ဖွူတာတှေ မရှေးပါနဲ့။ ကိုယျနဲ့လိုကျဖကျတဲ့ foundation ရှေးနညျးကိုတော့ ဒီမှာဖတျကွညျ့လို့ ရပါတယျ။
ပွီးရငျတော့ loose powder သုံးပါမယျ။ Loose powder ကို Stella ကတော့ အရောငျမပါတဲ့အမြိုးအစားကို ပိုသဘောကပြါတယျ။ Loose powder က အခြိနျကွာလာရငျ မိတျကပျကှကျတာ၊ အဆီပွနျတာတှကေို ထိနျးပေးပါလိမျ့မယျ။ ပါးနီ နဲ့ highlighter ကတော့ ယောငျးတို့သဘောကတြယျဆို ပါးပါးလေးထညျ့လို့ရပါတယျ။ Stella ကတော့ highlighter လေး နညျးနညျးထညျ့ရတာ သဘောကတြယျ။
ဒီအဆငျ့ကတော့ အရေးကွီးအဆငျ့ပါ။ ဘာလဲဆိုတော့ … မကျြခုံးမှေးဆှဲတဲ့အဆငျ့ပါပဲ။ မကျြခုံးမှေးက လူတဈယောကျရဲ့ အသှငျအပွငျကို လုံးဝပွောငျးပဈပေးနိုငျတာမို့ ကိုယျနဲ့လိုကျဖကျတဲ့ မကျြခုံးပုံစံကို ရှေးတတျဖို့လိုပါတယျ။ နောကျတဈခုက မကျြခုံးအရောငျကို ကိုယျ့ဆံပငျအရောငျနဲ့ ထပျတူကတြဲ့အရောငျ ရှေးပေးဖို့ပါ။ နဂိုမကျြခုံးရှိပွီးသား ယောငျးတှကေတော့ မကျြခုံးမှေးဂယျြလျ (brow gel) လေးနဲ့ သပျတငျပေးလိုကျတာနဲ့ လုံလောကျပါပွီ။
ဒီအဆငျ့ကတော့ အခြိနျမရှိရငျ ကြျောသှားလို့ဖွဈတဲ့အဆငျ့ပါ။ (Stella ကတော့ ကြျောနကြေ ) အိုငျးရှဲဒိုးကို သဘာဝဆနျဆနျ အညိုရောငျ ဖြော့ဖြော့လေးပဲ ပါးပါးတငျလိုကျပါ။ မသိမသာလေးပေါ့။ မကျြရဈပျေါမှာ အိုငျးလိုငျးနာအညိုလေးကို သေးသေးမြှငျမြှငျလေး ဆှဲပေးလိုကျရငျ ရပါပွီ။
မကျြတောငျကော့တဲ့ စကျလေးနဲ့ အရငျမကျြတောငျကော့ပေးပါ။ ပွီးရငျတော့ မကျြတောငျကော့ဆေး (mascara) နဲ့ စိတျရှညျရှညျကော့ပါမယျ။ (နှာတော့မခလြေိုကျနဲ့နျော )
နောကျဆုံးအဆငျ့မှာတော့ နှုတျခမျးနီလေးဆိုဖို့ပဲ လိုတော့တာပါ။ Stella ကတော့ ဒီရာသီဥတုမှာ ရိုးရိုးနှုတျခမျးနီတှေ၊ gloss တှထေကျ ဖကျြရခကျတဲ့ matte နဲ့ tint နှုတျခမျးနီတှကေို ပိုအားပေးပါတယျ။ အရောငျကတော့ ဒီနှဈမိုးရာသီမှာ ခတျေစားမယျ့အရောငျတှေ မှာဖတျကွညျ့ပေးနျော။ Stella ကတော့ လနျးဆနျးတဲ့အသှငျကိုပေးတဲ့ လိမ်မျောဖောကျအရောငျလေးကို ယောငျးတို့ကို ရှေးခယျြစခေငျြပါတယျ။
ထှကျလာမယျ့ makeup look လေးကတော့ ဒီလိုပုံစံလေးပါ။ အရောငျအငွိမျလေးနဲ့ နစေ့ဉျလုပျငနျးခှငျမှာ တကျကွှတဲ့အသှငျလေးမို့လို့ ယောငျးတို့ သဘောကနြှဈသကျမယျလို့ ထငျပါတယျနျော …
Tags: Beauty, cosmetic, look, makeup, monsoon, tips, tutorial